Ukuklama nokukhiqiza i-Hand Sanitizer Plastic Bottles sprayer ku-COVID-19
Ukuqhamuka kwamacala e-COVID-19 emhlabeni jikelele kuholele ekutheni i-sanitizer yesandla nezinye izibulala-magciwane zibaluleke kakhulu kunakuqala. Njengoba isidingo sale mikhiqizo sikhula, sinjalo nesidingo sokupakishwa kwekhwalithi ukuyiphatha. BONKE I-STAR PLAST (P. Pioneer), sikhonza njengebhodlela eligcwele kanye ne-spraye ...
Ithuba lokuhlanza nabathengi. Alukho uhlelo lokulethwa komkhiqizo oluguqule isiko lokuhlanza indlu njenge-trigger sprayer. Emashumini eminyaka adlule, izindlela zokuphila bezivela futhi zisishiya sinesikhathi esincane sokuhlanza, futhi sibeka ukuhlanzeka kusezingeni eliphansi. Inhlamvu sp ...
I-Larg est ne-Leading Beauty Industry Trade Fair
I-China International Beauty Expo yenza i-adrenaline rush ephezulu yemikhiqizo yobuhle nemikhiqizo yezimonyo. Imikhiqizo efana nemikhiqizo yokunakekelwa kwesikhumba, izimonyo, izinwele, impilo yemvelo nemikhiqizo yezipikili, imishini namathuluzi we-salon yobuhle, imikhiqizo yansuku zonke nemikhiqizo yokukhucululwa kwendle, izesekeli, amakha, i-essen ...